आर्थिक विकासका आधार - Karobar National Economic Daily
आर्थिक विकासका आधार
query_builderDecember 30, 2016 9:10 AM supervisor_accountखिमलाल देवकोटा visibility782
‘अबको निकास आर्थिक विकास’ निकै मन छुने नारा भएको छ । यो नाराले मन छुनुको कारण यो नै पर्याप्त छ कि नेपालमा विकास भएन, त्यसमा पनि आर्थिक विकास त हुँदै भएन । आर्थिक विकासमा नेपाल माथि जाने होइन, तल झर्ने गति तीव्रतामा छ । आर्थिक वृद्धिदर पहिलो पटक लगभग शून्यमा झरेको छ ।
अझै पनि मुलुक राजनीतिक गोलचक्करमा फसेका कारण अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएका छैनन् । तैपनि यसो भनेर सधैं सुख पाइँदैन । नेपालमा आर्थिक विकास अपरिहार्य छ र त्यो सम्भव छ ।
नेपालमा अर्थिक विकास किन भएन भनेर तर्क गर्दा भन्ने गरिन्छ, लामो समय नेपालले राजनीतिक क्रान्तिका लागि नै धेरै समय खर्च गर्‍यो । पटक–पटकका क्रान्ति अधुरा रहने र सम्झौतामा टुंगिने अवस्था रह्यो । सम्झौता गरेको केही समयपछि नै फेरि भिन्न रूपमा तर पुरानै अवस्था फर्किहाल्ने विडम्बना आइपर्‍यो ।
यसरी नै परिवर्तनकारीहरू पनि बिस्तारै पुरानैतिर ढल्कने र क्रान्तिको खास मर्म, मूल्य र मान्यता बिर्सने एक खालको चरित्र नै बन्न पुग्यो । क्रान्तिकारीहरू परिवर्तन गर्न व्यवस्थामा छिर्ने तर व्यवस्थाले नै उनीहरूलाई परिवर्तन गरिदिने अवस्था आइपर्‍यो । सिंहदरबारलाई होइन, सिंहदरबारले नेताहरूलाई बदलिदियो ।
व्यवस्थाकै कुरा गर्दा पनि संसद् र संसदीय व्यवस्था बदलिएन, बरु संसद्ले उनीहरूलाई नै बदलिदियो । यही चक्र बारम्बार घुम्दै रह्यो । व्यवस्था बदलिएन, व्यवस्थाले क्रान्तिकारीहरूलाई बदलिदियो । अवस्था त झन् जहाँको तहीँ रह्यो । बरु अझ तल झर्ने अवस्था आयो ।
अवस्था बदल्ने कुरा सोझै आर्थिक क्रान्तिसँग जोडिन्थ्यो, आर्थिक क्रान्तिको वातावरण कहिल्यै आएन । राजनीतिक क्रान्तिका उपलब्धि जोगाउन आर्थिक क्रान्ति अपरिहार्य थियो, तर आर्थिक क्रान्तिको पालो आउन नपाउँदै राजनीतिक क्रान्तिको रंग फेरिने र फेरि अर्को राजनीतिक क्रान्तिको आरम्भ हुने अवस्थाको पुनरावृत्ति भइ नै रह्यो ।
आर्थिक विकासका बाधक
हुँदा खाने र हुनेखानेमा बाँडिएको नेपाली समाज दुवैका आ–आफ्नै प्राथमिकता हुने नै भए । हुँदा खानेहरू खाने जोहोका लागि देश होइन, देशबाहिर भौंतारिन बाध्य भए । हुनेखानेहरू देशमा अनुकूल अवस्था नदेख्दा अनुकूल गन्तव्यको खोजीमा भौंतारिए ।
देश दुवै कारणले भौंतारिन नसक्नेहरूको आश्रयस्थल बन्यो अनि कसरी हुन्छ आर्थिक क्रान्ति ? अनि किन हुन्छ आर्थिक क्रान्ति ? भएन । सत्ता सञ्चालकहरूका लागि भने यो अवस्था विल्कुल अनुकूल रह्यो ।
आर्थिक क्रान्तिका भोकाहरू बाहिर–बाहिर भौंतारिने र भौंतारिन नसक्नेहरूको भोटले सत्तामा पुग्नेहरूका लागि हाइसन्चो नै बढी भयो । त्यसकारण उनीहरूलाई पनि आर्थिक क्रान्ति गर्नैपर्ने बाध्यता रहेन । त्यसकारण नेपालमा आर्थिक क्रान्ति भएन ।
अबको पालो आर्थिक विकासको
आर्थिक क्रान्तिको समय अब आयो । अब पनि आर्थिक क्रान्तिमा नेपाल अघि बढ्न सकेन भने त्यसपछि आइपर्ने अव्यवस्था धान्न नेपालले सक्नेछैन । विदेश भौंतारिनेहरू सदाका लागि बिदेसिएका होइनन् । समयक्रममा उनीहरू देश फर्कनेछन् । जतिबेला ती सबै थरी बिदेसिएकाहरू स्वदेश फर्कनेछन् त्यतिबेलाको अव्यवस्था कल्पना गरिसाध्य हुनेछैन ।
साथसाथै आर्थिक विकासको अभावका कारण नेपाल यति पछाडि परिसक्यो कि अब योभन्दा पछि पर्ने ठाउँ नै छैन । योभन्दा पनि पछि पर्ने हो भने नेपाल असफल राष्ट्रको सूचीमा पर्ने खतरा टड्कारो छ । त्यसैले चाहना वा बाध्यता दुवै कारणले नेपालमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने बेला आयो ।
नेपाल सर्वाधिक युवा जनशक्ति बहुमतमा भएको मुलुक हो । यो तथ्यांक आर्थिक विकासका लागि एकदमै अनुकूल अवस्था हो । नेपालको जनसंख्याको चित्र युवाहरू अत्यधिक बहुमतमा वृद्धहरू न्यून संख्यामा र बालबालिकाहरू पनि ठीकै संख्यामा रहेको अवस्था हो ।
बर्सेनि श्रमबजारमा ५ देखि ७ लाख जनशक्ति थपिँदै जाने गरेको छ । श्रमशक्ति आर्थिक विकासको मेरुदण्ड नै हो । यसको प्रचुरता आर्थिक क्रान्तिका लागि अनुकूल अवस्था हो । त्यसैले नेपालमा आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ ।
विकासे अड्डाहरूको अखडा
नेपाल विकासे संस्थाहरूको अत्यधिक मन पर्ने क्षेत्र पनि हो, संसारभरिका विकासे संस्थाहरूको जमघट यहाँ हुने गरेको छ । तर, राजनीतिक क्रान्तिको अवस्था र राजनीतिक खिचातानी तथा अस्थिरताको समस्याका कारणले आर्थिक विकासले गति पकड्न नसकेको साँचो हो ।
तर, अब सबको दिमागमा के परेको छ भने अब राजनीतिक क्रान्तिको अवस्था फेरियो । व्यवस्था फेरियो, अब अवस्था फेर्ने कुरा हो । त्यसका लागि आर्थिक क्रान्ति अनिवार्य छ । राष्ट्रको यो अनुकूल अवस्था विदेशी विकासे संस्थाहरूका लागि पनि एक अवसर हो । त्यसकारण यो अवस्थामा आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ ।
आर्थिक विकासवान् छिमेकी
भारत र चीन दुवैको छिमेकी नेपाल हुनु पनि अर्को सकारात्मक अवस्था हो । दुवै देश तीव्र आर्थिक विकासको गतिमा छन् । विश्वको पहिलो र पाचौँ अर्थतन्त्रका बीचमा हुनु नेपालका लागि सकारात्मक सन्देश हो । ‘हुने होस्, बरु नदिने नै किन होस्’ भन्ने उखान नेपालको हकमा पनि लागू हुन्छ ।
अब नेपालको अविकास भारत र चीन दुवै छिमेकीका लागि शोभनीय विषय हुनै सक्दैन । दुवै देशको आफ्ना कारणले पनि अब नेपालमा आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ । भारत र चीन दुवै देश आर्थिक क्रान्तिमा अघि बढ्ने, नेपाल भने जहाँको तहीँ रहने अवस्थाले सिर्जना गर्ने समस्यामा चीन र भारत दुवै पर्नेछन्, त्यसकारण पनि नेपालको अवस्थामा सुधार ल्याउन दुवै छिमेकीको चिन्ता र चासोको विषय बन्नैपर्छ ।
सचेत जनशक्ति आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । औद्योगिक क्रान्ति सम्पन्न भएका देशहरूमा त्यहाँको सचेत तप्का भनेकै मजदुरवर्ग हो । मजदुरहरूको सचेतनताका कारणले पनि आर्थिक विकास तीव्रतामा हुन जरुरी छ । दुनियाँमा यसो हुने गरेको छ । बेलायत, फ्रान्स वा रसिया यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
तर, नेपाल भने औद्योगिक क्रान्तिबाट गुज्रिएको देश होइन, न त मजदुर बाहुल्य भएको समाज नै हो । तर पनि विदेशी भूमिमा भौंतारिएर, केही देखेर, केही सीप हासिल गरेर र केही पुँजी पनि आर्जन गरेर फर्केको जमात पनि राम्रो भएको मुलुक हो ।
यो जनशक्तिसँग लगानी गर्ने पुँजी तदनुकूलको सीप र अनुभवसमेत छ । जो यहाँको आर्थिक क्रान्तिका लागि नितान्त उपयोगी हुने गर्छ ।
निर्वाहमुखी मात्र रहेको कृषि अब औद्योगीकरण र आधुनिकीकरणको पर्खाइमा बसेको छ । सामन्तवादी राजनीतिक परिवेश पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको समाज आर्थिक उन्नतिको तीव्र चाहना बोकेर बसेको छ । जनशक्ति पनि त्यही गतिमा अब समय बदलियो, अब परम्पराको सिकार भएर होइन, आधुनिक समयको उपयोग गर्न जान्नैपर्छ भन्ने उत्कट अभिलाषासहितको छ ।
यसरी समाज, परिवेश, राजनीति र जनशक्ति सबै आर्थिक क्रान्तिका लागि अनुकूल छन्, त्यसकारण नेपालमा आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ ।
नेपालको राजनीति आर्थिक विकाससँग जोडिएको थिएन, जोड्नुपर्छ भन्ने चेतनाको पनि अभाव थियो । अब राजनीतिलाई विकासमा जोड्ने वैकल्पिक राजनीतिको उदय पनि भइसकेको छ । यही वैकल्पिक राजनीतिको दृष्टिकोणका आधारमा पनि अब राजनीति भनेको जनतालाई सुख र खुसी दिने साधन हो भन्ने नयाँ परिभाषा स्थापित हुँदै छ ।
माक्र्सवादी भाषामा संरचना बदलियो, आधार बदल्नु जरुरी छ भन्ने मान्ने हो भने पनि नेपाली समाज यतिबेला त्यही बिन्दुमा अड्किएको छ, त्यसैले नेपालका आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ ।
(लेखक नयाँ शक्ति पार्टीका प्रवक्ता हुन् ।)
अर्थतन्त्र आर्थिक विकास राजनीतिक गोलचक्कर सुधारका संकेत